Faiba glaasi sunscreen Fabric Manufacturers & Suppliers - China faiba glaasi sunscreen Fabric Factory
Afọ 5 Akwụkwọ ikike Sunscreen Roller Type Glass Fiber Fabric
Site na nkwanye ụlọ nke oge a na shading, ọchịchọ na-arịwanye elu maka ngwaahịa ihe mkpuchi emeela ka mmelite nke ákwà mkpuchi. Ihe mkpuchi nke oge a na-agbakwunye ụcha, nghọta, nchebe gburugburu na ịchọ mma, ma ụdị ndụ niile nabatara ya. Ha na-emekwa ka anyị bịarukwuo okike nso ma na-elebara ndụ anya. Ngwongwo nke ihe mkpuchi ákwà na-agụnyekarị eriri fiber polymer ihe mejupụtara na polyester fiber polymer composite material.
The Groupeve iko eriri ákwà nwere magburu onwe akụkụ kwụsie ike, deformation ọnụọgụ mgbe okpomọkụ mgbanwe na nchegbu bụ obere, na ike ọdụdọ dị ike, ọkụ fim bụ elu, na ọrụ ndụ bụ nnọọ ogologo.
China Eco-friendly faiba glaasi Sunscreen Fabric 5% Openness
A na-eji akwa fiberglass anwụ na-acha uhie uhie kpoo PVC site na usoro pụrụ iche. Enwere oghere dị iche iche ka ịhọrọ, dịka1%, 3%, 5%, 10%. N'ime ha, akwa mepere emepe 10% nwere ike ịnweta ezigbo ọkụ na nghọta, mana arụmọrụ megide radieshon na ntanaka dị njọ. Anyị na-akwadokarị iji akwa nwere oghere mmeghe 10% n'akụkụ ụfọdụ ngosipụta anyanwụ (dị ka ugwu). A ga-ejikwa ya na ụfọdụ ákwà mgbochi iko nwere agba iji nweta ọkụ kacha mma na nghọta.
Na summery, e nwere ọtụtụ ụdị faiba glaasi sunscreen akwa n'ihi na nke dị iche iche nzukọ, imeghe na agba, oke nke faiba glaasi sunscreen akwa kwesịrị ịtụle abụọ ntụziaka, ya bụ àgwà nke na akwa na ya na ngwa gburugburu ebe obibi. Anyị nwere ike inye ndị ahịa anyị ndụmọdụ kachasị mma.
Eco-friendly Antibacterial Outdoor Faiba glaasi Solar Screen Fabric
Glass fiber bụ inorganic na-abụghị nke nwere ihe nwere ezigbo arụmọrụ yana akụkụ dị mkpa nke fiberglass sunscreen akwa. Ihe ndi ozo bu silica, alumina, calcium oxide, boron oxide, magnesium oxide, sodium oxide na ihe ndi ozo. Faiba glaasi anyanwụ ihuenyo ákwà ka nke eke mineral (quartz, ájá, soda, wayo). Tupu ịkpa ákwà, a na-eji PVC kpụọ eriri ọ bụla dị na iko, jiri otu kpuchie ya, ma mesịa mee ka ikpo ọkụ wee sie ike. Formdị a na akwa akwa akwa.
Ihe mejupụtara faiba glaasi anyanwụ ákwà bụ 35% faiba glaasi na 65% ịkwanyere ma ọ bụ 30% faiba glaasi na 70% ịkwanyere dị iche iche oghe.
Eco-friendly faiba glaasi Sunscreen Fabric 36% faiba glaasi Na 64% ịkwanyere
A na-eji akwa fiberglass anwụ na-acha uhie uhie kpoo PVC site na usoro pụrụ iche. Enweghi ọla dị arọ na ihe na-emerụ ahụ, nchekwa na mmekọrịta enyi na enyi, enweghị isi ọwụwa, enweghị mmerụ ahụ mmadụ, nkwụsi ike dị elu, mara mma ma mara mma, na ịcha agba dịkwa mma maka ịchọ mma nke oge a.
E nwere ọtụtụ dị iche iche nke faiba glaasi sunscreen ákwà n'ihi na nke dị iche iche nzukọ, imeghe na agba, otú ịhọrọ fiberglasslass sunscreen ákwà dị mkpa karịsịa. Anyị nwere ike ịnye ihe nlele n'efu maka ndị ahịa anyị ka ị nwee ike ịhọrọ akwa ma lelee ogo ozugbo. Ihe bụ ihe ọzọ, anyị niile na-akpa ákwà a nwalere tupu mbupu iji hụ na àgwà.
Factory Price ala Blinds faiba glaasi Sunscreen Fabric
A na-eji akwa fiberglass sunscreen kpara akwa PVC nke a na-eji ike emebe akwa site na usoro pụrụ iche. O nwere ike igbochi ìhè anyanwụ na ụzarị ultraviolet, nke bara uru na ahụike; iyo nchapu ọkụ, nweta ìhè okike, melite ogo ọkụ ime ụlọ, melite nkasi obi ubi ọhụụ; belata ọnwụ nke edo edo na mmiri, ma nwee ike ịhụ n'èzí n'ụzọ doro anya na-enweghị mbibi mmetụta ọhụụ. Enwere oghere dị iche iche ka ịhọrọ, dịka1%, 3%, 5%, 10%. Ọ bụ ihe bụ isi na-ekpebi ọrụ shading nke akwa ahụ.
N'oge ọkọchị, e nwere ọtụtụ ụdị fiberglass sunscreen akwa n'ihi nhazi dị iche iche, imeghe na agba.
Fashionable faiba glaasi Sunscreen Fabric 38% faiba glaasi na 62% ịkwanyere
A na-eji akwa fiberglass anwụ na-acha uhie uhie kpoo PVC site na usoro pụrụ iche. Enwere oghere dị iche iche ka ịhọrọ, dịka1%, 3%, 5%, 10%. Ọ bụ ihe bụ isi na-ekpebi ọrụ shading nke akwa ahụ. Anyị nwere ike ịhọrọ akwa dị iche iche mepere emepe dịka mkpa nke mpaghara ebe ụlọ ahụ dị. 5% na-ejikarị ya eme ihe, ọ na-egbochi radieshon nke anyanwụ. Iji chịkwaa ntigbu ma nweta ìhè sitere n'okike na nghọta dị mma, anyị na-akwado ya na ndịda.
Na nchịkọta, e nwere ọtụtụ ụdị faiba glaasi sunscreen akwa n'ihi na nke dị iche iche nzukọ, imeghe na agba, oke nke faiba glaasi sunscreen akwa kwesịrị ịtụle abụọ ntụziaka, ya bụ àgwà nke na akwa na ya na ngwa ebe. Anyị nwere ike inye ndị ahịa anyị ndụmọdụ kachasị mma.
Ire ọkụ retardant faiba glaasi Sunscreen Fabric N'ihi Office
A na-eji akwa fiberglass anwụ na-acha uhie uhie kpoo PVC site na usoro pụrụ iche. Ọ nwere ike ọ bụghị naanị iwepụ ihe ruru 80% nke radieshon nke anyanwụ, mana ọ na-ejikwa ikuku ikuku dị n'ime ụlọ, ma nwee ike ịhụ ebe dị n'èzí n'ụzọ doro anya. Ọ nwere ire ọkụ retardant Njirimara ahụghị na ndị ọzọ na akwa. Ezigbo fiberglass sunscreen fabric agaghị agbanwe ma ọ bụ carbonized n'ihi na ọkpọ dị n'ime ya bụ eriri iko mgbe ọre. Maka akwa nkịtị, ọkpụkpụ niile na-ere ọkụ ma na-ekpo ọkụ mgbe ọkụ gasịrị.
E nwere ọtụtụ dị iche iche nke faiba glaasi sunscreen ákwà n'ihi na nke dị iche iche nzukọ, imeghe na agba, otú ịhọrọ fiberglasslass sunscreen ákwà dị mkpa karịsịa.
Ezi Flatness N'èzí Blinds faiba glaasi Sunscreen Fabric 2.5m Obosara
A na-eji akwa fiberglass anwụ na-acha uhie uhie kpoo PVC site na usoro pụrụ iche. Ọ bụ ihe dị n'ime ala ma ọ naghị enye nje na-eto eto. Nje bacteria enweghị ike mụta nwa na akwa ahụ agaghị akpụzi. Ọ naghị agbasa ahụ siri ike na ikuku ma ghara ịgbaso ntụ ma ọ bụ nke nwere ike belata oke uzuzu. Ihe bụ ihe ọzọ, ọ dịghị mkpa ka ume, eke adọka eguzogide, na ịrịba ifufe na-eguzogide na n'ibu Njirimara idi Ugboro ojiji.
Home ihe ndozi faiba glaasi Sunscreen Fabric 38% faiba glaasi na 62% ịkwanyere
A na-eji akwa fiberglass sunscreen kpara akwa PVC nke a na-eji ike emebe akwa site na usoro pụrụ iche. O nwere ike igbochi ìhè anyanwụ na ụzarị ultraviolet, nke bara uru na ahụike; iyo nchapu ọkụ, nweta ìhè okike, melite ogo ọkụ ime ụlọ, melite nkasi obi ubi ọhụụ; belata ọnwụ nke edo edo na mmiri, ma nwee ike ịhụ n'èzí n'ụzọ doro anya na-enweghị mbibi mmetụta ọhụụ. Enwere oghere dị iche iche ka ịhọrọ, dịka1%, 3%, 5%, 10%. Ọ bụ ihe bụ isi na-ekpebi ọrụ shading nke akwa ahụ. Anyị nwere ike inye ndị ahịa anyị ndụmọdụ kachasị mma.
O kwesịrị ekwesị maka ụlọ oriri na ọ ,ụ hotelsụ, ụlọ obibi, ebe obibi dị elu, ebe ntụrụndụ, wdg. Ogologo Groupeve fiberglass sunscreen fabric bụ 30m kwa mpịakọta. Mpịakọta ọ bụla juru n’ime akpa akwụkwọ siri ike.
Kasị ewu ewu faiba glaasi Sunscreen Fabric 5% imeghe
A na-eji akwa fiberglass anwụ na-acha uhie uhie kpoo PVC site na usoro pụrụ iche. Enwere oghere dị iche iche ka ịhọrọ, dịka1%, 3%, 5%, 10%. N'ime ha, 1% ruo 3% oghere nke akwa ahụ nwere ike igbochi ikpo ọkụ nke sitere na radieshon nke anyanwụ ruo n'ókè kachasị ma chịkwaa ọkụ, mana ìhè okike ga-abanye obere na mmetụta nghọta bụ nke dara ogbenye. Yabụ, anyị na-atụkarị aro ya n'akụkụ ụfọdụ ikuku ịgbanyụ ọkụ (dị ka ọdịda anyanwụ) yana mgbe mgbidi mgbochi ahụ bụ iko transperent. Iji dozie nsogbu nke ike okpomọkụ radieshon na-enwu gbaa ìhè anyanwụ.
Na nchịkọta, e nwere ọtụtụ ụdị fiberglass sunscreen akwa n'ihi nzukọ dị iche iche, imeghe na agba, nhọrọ nke fiberglass sunscreen akwa kwesịrị ịtụle ụzọ abụọ, ya bụ ogo akwa ahụ n'onwe ya na gburugburu ebe obibi. Anyị nwere ike inye ndị ahịa anyị ndụmọdụ kachasị mma.
N'èzí Blinds na Awnings owuwu ụzọ mbata Faiba glaasi Solar Screen Fabric
The faiba glaasi anyanwụ ihuenyo ákwà na-kpara site elu-ike iko eriri ntekwasa ịkwanyere site a pụrụ iche usoro. Enwere ike ịkọwapụta uru nke fiberglass sunscreen akwa naanị: sunshade, mkpuchi na uzo.
Kpọmkwem kwuru banyere:
1. Gbochie okpomọkụ sitere na radieshon nke anyanwụ, belata ihe ndozi ikuku;
2. Nyocha ọkụ, nweta ìhè okike, melite ogo ime ụlọ na nkasi obi anya;
3. Enweta magburu onwe nghọta, nke nwere ike ọ bụghị naanị na-enwe obi ụtọ doro anya eke mma n'èzí ma gbochie n'èzí si peeping;
4. Na-arụ ọrụ nke ọma igbochi ụzarị ọkụ ultraviolet siri ike ịbanye n'ime ụlọ ahụ, nke bara uru maka ahụike.
Uzo faiba glaasi Sunscreen Fabric 5% Mepee
A na-eji akwa fiberglass sunscreen kpara akwa PVC nke a na-eji ike emebe akwa site na usoro pụrụ iche. Enwere ike ịkọwapụta uru nke fiberglass sunscreen akwa naanị: sunshade, mkpuchi na uzo.
1. Shading na mkpuchi mkpuchi, na-ebelata ikuku conditioner ibu ma chekwaa ike ikuku ikuku;
2. Mgbe ị na-ehichapụ ihe n'ụzọ dị irè, nweta mpaghara ọhụụ dị mma na-enweghị emetụta ncha ụlọ.